Nhau - Rongedza kupaka neAI IOT
Chengetedza kupaka neAI IOT
Iine kukurumidza kukura kweAI, Yayo tekinoroji kunyorera mhedzisiro yakaitwa mune akawanda maindasitiri mune yenyika hupfumi. Zvakadai seAI + kumba, AI + Security, AI + Medical, AI + dzidzo zvichingodaro. TBIT ine mhinduro nezve kudzora kupaka neAI IOT, vhura mashandisiro eAI mumunda wemaguta akagovaniswa e-mabhasikoro. Gonesa iyo e-bhasikoro kuti igone yakamisikidzwa-poindi uye inotungamira kupaka panguva imwe chete. Pamusoro pezvo, ine kugadzikana kwakasimba uye mutengo wakaderera, uyo unogadzirisa kusvika pamwero wakakura matambudziko ekupararira kusarongeka uye kutarisira kwakaoma kwakasangana mumaguta.
Ikozvino mamiriro ekupaka kwemaguta
Iko kupaka kwee-mabhasikoro hakuna kunyatsorongedzwa, izvo zvinotadzisa mamiriro emumaguta uye vagari kufamba kwemazuva ese. Kwemakore aya, huwandu hwekugovana e-bhasikoro hunowedzera zvakanyanya. Nekudaro, mamiriro ezvinhu ekupaka nzvimbo haana kunaka, iyo yekumisikidza yekumisikidza haina kukwana zvakakwana, iyo chiratidzo chakasarudzika. Kudzosera iyo e-bhasikoro kunonoka, kana kunyangwe iyo e-bhasikoro inopinda munzira isingaone, zvinoitika nguva nenguva. Parizvino, kuoma kwekutarisira kwekupaka mumaguta akasiyana siyana munyika medu kuri kuramba kuchikura. Iwo manejimendi e-bhasikoro haana kunyatso kukwana, uye manyorerwo manejimendi anoda yakawanda yekumanikidza uye zviwanikwa zviwanikwa, izvo zvakaoma kwazvo.
Iko kunyorera nezve AI mukupaka munda
Mhinduro yekugadzirisa kupaka neAI IOT yeTBIT ine zvayakanakira izvi: Kubatana kwakangwara kwazvo, kuenderana kwakasimba, kugona kuita zvakanaka. Inogona kutakura chero mhando yekugovana e-mabhasikoro. Tonga chinzvimbo uye chinongedzo cheiyo e-bhasikoro nekuisa yakangwara kamera pasi pebhasikiti (Nebasa nezve kudzidza zvakadzama). Kana mushandisi adzorera e-bhasikoro, vanofanirwa kupaka e-bhasikoro munzvimbo yakatarwa yekupaka uye iyo e-bhasikoro inobvumidzwa kudzoserwa mushure mekunge yaiswa yakatwasuka munzira. Kana iyo e-bhasikoro ikaiswa zvisina kurongeka, mushandisi haigone kuidzosa zvinobudirira.Iyo inonyatso kudzivirira izvo zviitiko zvee-mabhasikoro anokanganisa nzira dzevanofamba netsoka uye kutaridzika kwemadhorobha.
TBIT's AI IOT ine yakavakirwa-mukati yakadzamidzirwa neural network processor, ichishandisa yakadzika yekudzidza algorithms, yakakura-yakakura-chaiyo-nguva chaiyo AI yekuona njere tekinoroji. Inogona kushandiswa mune chero chiitiko. Inogona kuverenga mapikicha ekupinda munguva chaiyo, nenzira kwayo uye pamwero mukuru, uye kunyatso kuwana kumisikidzwa kwakaringana kwemidhudhudhu, yakamisikidzwa-poindi uye yekumisikidza kupaka, kukurumidza kuziva kumhanya uye kukwirira kwekuzivikanwa kwepamusoro.
TBIT inotungamira iyo indasitiri kuenderera mberi kwekuvandudza tekinoroji
Mushure mekugadzira huwandu hwetekinoroji-yekucheka matekiniki senge maBluetooth emigwagwa, yakakwenenzverwa kumisikidza, kupaka yakamira, uye RFID yakamisikidzwa-poindi yekupaka, TBIT yakaramba ichivandudza nekuenderera mberi kuenda kumberi, uye R&D iyo AI IOT uye tekinoroji yekumisikidza. .Takazvipira kugadzirisa matambudziko ekushanda eindasitiri yakagovaniswa, tichienzanisa mamiriro ekupaka ekugovana e-mabhasikoro, uye kugadzira guta rakachena uye rakatsiga chitarisiko uye nharaunda ine hunyanzvi uye yakarongeka.
Kutarisana netarisiro yakafara yemusika yekugovana e-mabhasikoro, TBIT ndiyo yekutanga kambani muindastiri kushandisa AI tekinoroji kumunda wekugovana e-mabhasikoro. Mhinduro iyi parizvino ndiyo mhinduro chete pamusika inogadzirisa zvese zvakagadziriswa-poindi uye zvinongedzo matambudziko. Uyu musika une mukana, TBIT inoda kubatana newe.